8. desember 2021 - NorSom News
Daily Archives: Des 8, 2021
Qoyskan oo ku wada dhintay dab ka kacay guri kuyaal duleedka drammen.
Norsomnews - 8. desember 2021
Daawo NorSom TV: Xaaladihii ugu danbeeyay ee corona iyo xeerarka cusub ee dowlada kasoo baxay.
Faafitaanka xanuunka ee Sweden oo ka yar Norway iyo dalalka kale: Sweden ma saxnaayeen bilowgii?
Waxey furtay Joornaalka caafimaad ee xaaskii hore ee ninkeeda: Shaqada ayaa laga ceyriyay.
Dowlada:Qaabkan ayaan dhaqaale ahaan u kabeynaa dadka biilasha korontadu bixin kari la´.